Altai Massif: njirimara, mbido, ihu igwe na biodiversity | Netwọk Mgbasa Ozi
Taa, anyị ga-ekwu maka otu ugwu dị n'etiti Central Asia nke amara nke ọma dịka Russia, China, Mongolia na Kazakhstan si kwuo. Ọ gbasara Altai massif. O bu nke ugwu Altai na osimiri Irtish, Obi na Yenisei. Ọ bụ ala jupụtara n'akụkọ ifo na akụkọ mgbe ochie sitere n'ọgbọ ruo n'ọgbọ. Ka oge na-aga, ọ ghọrọ ala ebe okike nwere ike igosipụta ihe niile ọ nwere ike.
Ya mere, anyị ga-arara edemede a iji gwa gị njirimara niile, ntọala na mbido nke Altai massif.
2 Mmalite nke Altai massif
3 Ala data nke Altai massif
4 Ihu igwe na ụdị mmiri dị iche iche
Ọ bụ massif nke dị na ugwu dị n'etiti Asia na ebe Russia, Mongolia, China na Kazakhstan na-ezukọ. Enwere steepụ sara mbara, ahịhịa lush na osisi dị larịị. Ihe a niile na-ebili n'ima mara mma nke snow na-ekpuchi elu ya na mma mara mma nke tundra. Nchịkọta nke usoro okike ndị dị na mpaghara a na-eme ka ebe ahụ maa mma. Ka oge na-aga, ọ ghọọla ebe amaara ama maka ndị njem ịga njem njem.
Ọ bụ ebe gafere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ kilomita 2000 site n’ebe ugwu ọdịda anyanwụ ruo na ndịda ọwụwa anyanwụ. Yabụ, Altai Massif nwere oke ala dị n'etiti ala kpọrọ nkụ nke Mongolia na ọgaranya ọdụ nke ndịda Siberia. Mpaghara ihu igwe abụọ na -emepụta ọdịdị ala nke iche iche dị ịtụnanya. Eziokwu bu na otutu uzo di iche-iche nke di na Altai massif di ka a ga - asi na anyi na - acho akwukwo nke atlas geography.
Ọbụghị naanị na mbara ala na-aghọ mma ka mmadụ wee nwee ike ileta ya, ọ bụ akwụ akwụ puku puku ahịhịa na ụdị anụmanụ.
Mmalite nke Altai massif
Anyị ga-ahụ ihe mbido ugwu ndị a nwere na mmalite kemgbe ọtụtụ afọ. Ebumnuche nke ugwu ndị a nwere ike weghachite na ikike tectonic nke dị n'ihi tectonics plate. Anyị maara na efere tectonic na-aga n'ihu na-aga n'ihi ebugharị ntụgharị nke uwe elu ụwa. Nke a na-enye ohere ka efere ndị ahụ kụkọta ma mepụta ugwu ọhụrụ. N'okwu a, a pụrụ ịchọta mmalite nke Altai massif site na nkwekọrịta tectonic ọgụ dị n'etiti India na Asia.
Enwere nnukwu usoro mmejọ na-agafe mpaghara a dum na A na-akpọ ya mmejọ Kurai na nsogbu ọzọ Tashanta. Sistemụ ihe ọjọọ niile a na - eme ka ụdị dị iche iche na - ebugharị, na - eme ka efere ahụ rụọ ọrụ. Mmeghari nke nkume ndị dị na Altai massif kwekọrọ na nkume granite na metamorphic. Werefọdụ n'ime nkume ndị a dị elu nke ukwuu n'akụkụ mpaghara nsogbu ahụ.
Mmalite nke aha Altai massif sitere na Mongolia "Altan", nke putara "ọla edo". Aha a sitere n'eziokwu bụ na ugwu ndị a bụ n'ezie ihe dị ịtụnanya nke na-eju onye ọ bụla anya n'ihi ọdịiche ha na mma ha.
Ala data nke Altai massif
Anyị na-aga na ndịda Siberia ebe enwere nnukwu ugwu atọ nke ugwu Altai pụtara, bụrụ oke ala dịka oke ala dị egwu. Okirikiri ala ndị a bụ ebe kachasị elu na mpaghara niile nke ndịda Siberia akpọrọ Ugwu Beluja. Ọ nwere elu nke mita 4506 ma marakwa maka ịbụ mpaghara bara ọgaranya. N’ugwu ndịda Siberia amụrụ ya site na nnukwu osimiri ndị dị n’akụkụ ọwụwa anyanwụ nke Russia.
Altai Massif dị na etiti Eshia, ihe dị ka etiti 45 Celsius na 52 Celsius North na n'etiti 85 Celsius na 100 Celsius nke Longwich nke dị na Greenwich, ma dịrị n'etiti etiti Russia, China na Mongolian. Currentdị enyemaka ndị dị ugbu a bụ nke elu, mkpumkpu ebe di iche-iche di elu, nkanka na miri ndagwurugwu. Ihe enyemaka niile a bụ nzụlite nke mbara ala dị mgbagwoju anya. Ma ọ bụ na na njedebe nke oge Mesozoic oge ochie guzobere ugwu oge ochie site na mpịachi Hercynian wee gbanwee kpamkpam ka ọ bụrụ peneplain.
Ugbua na Tertiary, mpịachi ugwu bụ nke na-eme ka ugwu niile dị ọhụrụ, na-akụda ma na-ewepụta ihe mgbochi dị iche iche. Nmegharị a mere n'ụzọ na-esighi ike na Quaternary n'otu oge ahụ osimiri na glaciers na-arụ ọrụ na-emetụta ume.
Ihu igwe na ụdị mmiri dị iche iche
Anyị ga-enyocha isi akụkụ nke ihu igwe na ụdị dị iche iche nke Altai massif. N'ihi ohere na ọnọdụ dị n'etiti nnukwu Eurasia, ndị Altai massif o nwere ajọ ihu igwe nke nwere ọnọdụ ihu igwe na kọntinent. Mmiri ozuzo ya dị ụkọ na ọkọchị. Ogologo nwere ihe jikọrọ ya na ihu igwe. Nnukwu ọkụ dị elu kwa afọ pụtara na e nwere ụkpụrụ dị n'agbata ogo 35 na okpomọkụ dị n'okpuru ogo 0 n'oge oyi yana obere oge ọkọchị nke ọ gafere 15 ogo.
Ihu igwe a na-etolite ahịhịa na-anabata ya. Oké ọhịa, ahịhịa ndụ na ahịhịa ndụ nke ihe odide ndị siri ike na-amalite na nnukwu Altai, dịkarịsịrị n'ọzara Gobi. N'okpuru echiche 1830 mita, ugwu ndị ahụ nwere oke osisi na osisi sida, larches, pines na birch. N'etiti osisi na mmalite nke snow enwere a elu nke banyere 2400-3000 mita nke elu. A na-ahụ ebe ịta nri Alpine n'akụkụ niile a.
Ugwu ugwu nile nke Altai massif di nkpa ebe obu na o bu uzo nkewa n’etiti osimiri ndi gara n’osimiri Pasifik na osimiri ndi ahu na asọba n’osimiri Arctic Glacier. Abụọ n'ime osimiri ndị kachasị mkpa na Eshia niile nwekwara isi iyi ha: ndị Obi na ndị Yenisei. Na agbanyeghị nke a, ezigbo netwọkụ mmiri na mpaghara mmiri a bụ mmiri iyi na-esi n'ọdọ mmiri na-abanye na ya ma na-agagharị n'okirikiri ice. Usoro ya anaghị agbanwe agbanwe ebe ọ bụ na ahụ efe nke ugwu ahụ mere ya.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere Altai massif, njirimara ya na mmalite ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Altai Massif